Ushicilelo lweXiaomi Mi 8 Explorer: iinkcukacha kunye neempawu zesiphelo esitsha senkampani | I-Androidsis
UAron Rivas | | Xiaomi
Namhlanje ibilusuku oluhle lwenqaku laseChina uXiaomi. Emva kokubonisa Iiflethi Siyi8, kunye naphakathi kuluhlu oluphakathi ukwahluka Mi 8 SE, inkampani ayimanga apho kwaye yasazisa kuXiaomi Mi 8 Explorer Edition, Inguqulelo enamandla ngakumbi yeyokuqala ekhankanyiweyo enezinto ezintsha ezingabonwayo kwezinye iifowuni.
Esi sixhobo sinendawo efanelekileyo ethe ngqo engenanto yakubamonela abanye abahambahambayo.Ukongeza, inenkqubo yokwamkelwa kobuso ye-3D, umfundi ofaka iminwe phantsi kwescreen, i-animojis, kunye noyilo olungasemva olubonakalayo, ngaphandle kwamathandabuzo, olubonisa ukuba isigebenga saseAsia besisebenza nzima kwezi nyanga zidlulileyo. Yazi!
Phakathi kweempawu eziphambili ezihanjiswa yile smartphone, Sifumene isikrini esine-6.21-intshi ye-AMOLED FullHD + esenziwe yiSamsung ngesisombululo seepikseli ezingama-2.248 x 1.080, ubungakanani obusinika slim kunye nobude be-19: ifomathi yepaneli ye-9. Ngaphakathi sifumana iprosesa I-Qualcomm Snapdragon 845 i-core-core (4x Cortex-A75 kwi-2.8GHz + 4x Cortez-A55 kwi-1.8GHz) ye-64-bit yoyilo kunye ne-14nm kunye ne-Adreno 630 GPU, 8GB ye-RAM, 128GB yendawo yokugcina yangaphakathi, kunye ne-Android Oreo njengenkqubo yokusebenza kunye umaleko omtsha wokwenza ngokwezifiso MIUI 10 iboniswe ngesimbo namhlanje kumsitho.
Ngokubhekisele kwicandelo lokufota, el I-Xiaomi Mi 8 Edition Edition ine-sensor yangemva kabini ekubekwe kuyo i-megapixel eyi-363 ye-lens IMX12 lens enkulu ene-f / 1.8 aperture kunye ne-1.4μm pixel size kunye ne-5MP Samsung S3K3M12 isivamvo sesibini esine-f / 2.4 aperture kunye ne-1.0 μm pixel size. Kwikhamera yangaphambili sine-20MP isisombululo sesisombululo kunye f / 2.0 ukuvula kunye nobungakanani be-pixel ye-1.8μm. Kufuneka iqatshelwe into yokuba ezi zinto zinikwe amandla obukrelekrele bokusebenza kwe-AI ukuphucula ukuthatha ii-selfie kunye nemowudi yemizobo eneempembelelo zeBokeh ezinoluvo kwimakethi. Basibonelela ngemisebenzi emininzi eyongezelelweyo apho sifumana khona imo ye-HDR, imo yepanoramic kunye nokunye.
0.1 Ngaphantsi kwescreen sokufunda ngeminwe, i-GPS ezimbini, uyilo olwahlukileyo, kunye nokuninzi ...
1 Ixabiso kunye nokufumaneka kweXiaomi Mi 8 Explorer Edition
Ngaphantsi kwescreen sokufunda ngeminwe, i-GPS ezimbini, uyilo olwahlukileyo, kunye nokuninzi ...
Ukubuyela kumxholo wesikrini, Ngokungafaniyo neXiaomi Mi 8, esi sixhobo siza nesifundi seminwe phantsi kwepaneli njengaleyo Ndihlala kwiX20 Plus yazisa emarikeni kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo. Ukongeza koku, iza netekhnoloji yokwazisa yobuso ye-3D echonga indawo nganye yobuso ngokusekwe kubunzulu bayo isebenzisa ukukhanya, kunye neenzwa ezininzi ukulinganisa i-engile nganye. Yintoni egqithisile, Inemigca-mbini ye-GPS enikezela ngokuchaneka kwe-30cm ngokuthelekiswa ne-5m ethi iinkqubo ezikhoyo zifakwe kuninzi lweefowuni ezisibonelelayo.
Ngokusekwe kuyilo lwangasemva, Ifemu ikhethe iglasi eguqukayo ephezulu nakwindawo esezantsi apho ungabona khona izinto ezidityaniswa yile mobile. Oku kutsala umdla omkhulu, kwaye inyani kukuba iyaxabiseka into yokuba inkampani ivule ukubheja okunomdla kakhulu ukuphuma kwinqanaba kunye neendlela ezikhoyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, yinto ephawuleka ... Ayisiyonto iXiaomi njengenye yeenkampani eziphumelele kakhulu ngalo mzuzu.
Ikwabandakanya eyayo iAnimojis, kodwa ngokwezifiso zeXiaomi, kunjalo. Oku kuthatha ithuba lokusetyenziswa kwe-infrared, ukusondela, ukukhanya kunye nealbenz sensor, kunye ne-sensor yangaphambili.
Ixabiso kunye nokufumaneka kweXiaomi Mi 8 Explorer Edition
Ushicilelo lweMi 8 Explorer lubhengezwe namhlanje e China ngexabiso le-3.699 yuan, indleko elingana nama-euro angama-500 ukutshintsha. Okwangoku, izakufumaneka kuphela e-China, yiyo loo nto kuyakufuneka silinde isigebenga setekhnoloji ukuyazisa ngeYurophu kunye nehlabathi liphela. Okomzuzwana, iya kufumaneka kuphela ngombala omnyama, nangona kunokwenzeka ukuba amasebe anemibala eyahlukeneyo abhengezwe njengoko ixesha lihamba. Masithembe!
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » I-Xiaomi Mi 8 Edition Edition: iinkcukacha kunye neempawu zokuphela okuphezulu kwenkampani
UFredy Rego Engeler sitsho
Kwaye iya kuba yeyamazwe onke kwaye ingathengwa eYurophu?
Phendula uFredy Rego Engeler
Ewe kuya kuba njalo. Ngumcimbi wexesha kuphela ukuba uXiaomi abhengeze kwimimandla eyahlukeneyo.
Intle i-X X ... uxolo xiaomi bendifuna ukuthi ...